हट बिपाशा बनिन् करणको तेश्रो पत्नी , ६ केटासंग थियो उनको अफेयर !! - Experience Best News from Nepal
हट बिपाशा बनिन् करणको तेश्रो पत्नी , ६ केटासंग थियो उनको अफेयर !!
बिपाशा फिल्म क्षत्रमा प्रबेस गर्नुभन्दा अगाडी नै मोडलीङमा प्रसिद्ध थिइन् । बिपाशा बलिउड सिनेमामा हाँरर फिल्ममा बढी अभिनय गर्ने गर्दछिन् । आज सम्म उनले धेरै नै हाँरर चलचित्रमा अभिनय गरीसकेकी छिन् । उनको सबै भन्दा पहिलो हाँरर फिल्म ‘राज हो ।
करीब दुई वर्षदेखि बलिउडबाट बाहिर रहेकी बिपाशा अहिले पति करण सिंह ग्रोवरसँग विवाहीत जीवन व्यतित गरी रहेकि छिन् । दुबैको विहे २०१६ मा भएको थियो । करणको यो तेस्रो विहे हो । यो भन्दा पहिले उनले श्रद्धा निगम र जोनिफर विंगेटसँग विहे गरीसकेका थिए। यसै गरी बिपाशाले पनि विहे भन्दा पहिले बलिउडमै ६ जना एक्टर्ससँग डेट गरीसकेकी थिइन् ।
बिपाशाको पहिलो प्रेम सुपरमोडल मिलिन्द सोमनसँगको लाई मानिन्छ । बिपाशा र मिलिन्दको पहिलो भेट मोडलिङकै समयमा भएको थियो । त्यो समय बिपाशा आफ्नो व्यस्तताका कारण मिलिन्दलाई समय दिन सक्दैनथिन् । जस कारण दुबै बिच दुरी बढ्यो र सम्बन्ध ब्रेकपमा पुग्यो ।
बिपाशाले डिनो मोरयासँगको अफियरमा पनि धेरै सुख बटोलेकि थिइन् । चलिचित्र राज को छायाँङकनको समयमा बिपाशा र डीनो मोरिया एक अर्काको नजिक भई सँगै प्रेममा परेका थिए । धेरै समय नटिकेको यो प्रेम सम्बन्ध पनि ब्रेकअपको मोडमा पुग्यो ।
बिपाशा र जोन अब्राहम करीब १० वर्ष सम्म रिलेशनमा रहेका थिए । फिल्म सायाको शुटिङमा नजिक भएका यि दुबै छिटै नै प्रेम प्रेमिका भएका थिए । जोनसँग पनि बिपाशाले सन् २०११ मा ब्रेकअप गरेकी थिइन् ।
बिपाशा बसुले फिल्म बहुबलीका दुगुबत्तीसँग पनि अफिएर रहेको थियो । दुबै सन् २०११ मा फिल्म दम मारो दम को समयमा एक आपसमा नजिक भएका थिए । तर यो सम्बन्ध भने धेरै लामो समय सम्म टिक्न भने सकेन ।
राणा दग्गुबती पछि सैफ अली खानसँग पनि बिपाशाको नाम जोडीएको थियो । रेस–२ को शुटिङको समयमा यि दुबैको नजिकिएको खबर बाहिर आएको थियो । तर सैफले २०१२ को अक्टोबरमा करीनासँग दोस्रो विवाह गरेपछि यो खबर आफैमा विलय भयो ।
यसपछि बिपाशाको नाम हरमा बवेजासँग जोडीन पुग्यो । २०१४ मा बिपाशा आफैले ट्वीट गरेर आफ्नो रिलेशनशिपको कुरा बताएकी थिइन् । तर ६ महिना पछि यो जोडी पनि अलग भयो ।